Shir madaxeedkii IGAD oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaShir madaxeedkii IGAD oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay
September 13, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Shir-weyanah madaxda urur goboleedka IGAD oo Muqdisho lagu soo gabagabeeyay galabta oo Talaado ah. Sawirka: Twitter.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shir madaxeedkii wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD oo maanta oo Talaado ah si rasmiya uga furmay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa galabta lasoo gabagbeeyay.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyata iyo RW Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa shirka kasoo qaybgalay.
Intii uu shirka uu socday, arrimaha ugu muhiimsan ee shirka looga hadlay ayaa waxaa kaimd ahaa xaaladaha wadamada Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan.
Qodobada war-murtiyeedka shirka kasoo baxay oo aan idiin soo turjumnay hoos ka akhriso:
Waxaa la cadeeyay madaxbanaanida, midowga dhullka, madax-banaanida siyaasada iyo mid ahaanshaha Soomaaliya.
Waxaa lasoo dhaweeyay hanaanka doorashooyinka dimuqraadiga ah oo ay dowlada federaalka Soomaaliya ku doonayso in ay hirgaliso sanadkan 2016.
Waxaa lagu celiyay in dowlada Soomaaliya ay iyadu xaq u leedahay in ay hoggaamiso ayna samayso xasiloonideeda iyo dib u dhiska dalka.
Waxaa aad loo soo dhaweeyay shirka madasha saree e qaranka Soomaaliya oo Muqdisho oo ku saabsan hanaanka doorashada 2016.
Waxaa lasoo dhaweeyay balanqaadka DFS si loogu kalsoonaado, oo xalaal ah in ay dalka ka dhacdo
Waxaa la dhiiri geliyay in dhamaan dadka Soomaaliyeed ay ka qaybqaataan hanaanka doorashada 2016 waxaana loo rajeeyay in ay noqoto mid xor ah oo xalaal ah wakhtigeedana la qabto.
Waxaa la bogaadiyay hanaanka dib u kabashada dalka waxaana lagu dhiirigeliyay in si deg deh ah loo dhameeyo maamul u samaynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe.
Waxaa la codsaday Howlgalka Midowga Afrika ee jooga Soomaaliya in la siiyo dhamaan waxayaabaha muhiimka ah ee amaanka oo ay u baahantahay hanaanka doorashada.
Waxaa la cambaareeyay weeraradii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab ay ka geysatay Soomaaliya.
Waxaa lasoo jeediyay in la balaariyo howlgalada ciidamada amaanka ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ka dhanka ah maleeshiyada Al-Shabaab si dhaqso ahna looga xoreeyo deegaanada gacantooda ku harsan.
September 13, 2016 Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyata oo markii ugu horeysay tagay Soomaaliya si uu uga qaybgalo shir madeexda IGAD
Madaxweynaha Puntland oo si diiran loogu soo dhaweeyay Addis Ababa
Addis Aababa-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Addis Ababa galabta oo Isniin ah. Madaxweyne Cabdiweli ayaa waxaa garoonka caalamiga ah ee Addis Aababa kusoo dhaweeyay Wasiirka [...]
Somali pirates kidnaped Tuvalu-flagged commercial ship off Somalia’s coast
Garowe-(Puntland Mirror) Suspected Somali pirates kidnapped a commercial ship off the coast of Somalia, Reuters news agency reported on Saturday. A security source working at the Puntland Marine Police Force said the vessel was Tuvalu-flagged [...]
Bosaso-(Puntland Mirror) President Abdiweli Mohamed Ali of Puntland traveled to Saudi Arabia to perform the hajj this year, he told reporters late Thursday at Bosaso airport. Government officials including parliament speaker will accompany the President’s visit to [...]